Ny androaniko | Jolay 2016 | 2
[Ankapobeny ] 12 Jolay, 2016 07:50
Fanoloana ny Mpiambina eny amin'ny Lapa-panjakana italianina
Naka fotoana mihitsy aho tamin'ny alahady mba hanatrehako ity. Marina fa eny amin'ny lapa toy itony, sy eny amin'ireo toby miaramila ihany koa dia misy isan'andro ny matso kely rehefa hiova ny anjara fiambenana. Ny ao amin'ny Quirinale, ny Lapa-panjakana misy ny Filohan'ny Repoblika, dia ao an-tokotany no anaovana izany isan-kariva fa rehefa alahady kosa dia eo amin'ny kianja malalaka manoloana ny Lapa ka azon'ny rehetra atrehana. Ny tena moa rehefa monina amin'ny toerana iray dia tsy maika intsony hijery ny zava-mahaliana ao amin'ilay tanàna, hany ka manao rahampitso lava. Fa vitako ihany izy ity na dia efa 25 taona nipetrahana teto aza.
Ny baiko tena niasa tao izany dia ho an'ny "Guardia montata !" (guarde montée, mpiambina apetraka) sy ny "Guardia smontata !" (garde démontée, mpiambina esorina).
Nandritra ilay lanonana fohy (15 minitra ary nofaranana tamin'ny kaonseritra kelin'ny Mpitsoka Mozikan'ny "Carabinieri") dia reko nanetoka kely ery tany anaty foko tany, nahatsiaro ny fotoana nanaovana raharaha miaramila teny amin'ny Toby RAAA teny Betongolo, isan'ny fotoana nankafiziko indrindra tamin'ny fiainako.
(somary notapatapahako kely ihany ilay horonantsary)
[Ankapobeny ] 10 Jolay, 2016 21:33
Faly aho, tena faly fa Portugal no nandrombaka ny amboara Euro 2016
Mba tsarovana ato anaty blaogy ihany aloha ity fa tena tsy mpijery baolina sy mpiondana an'ity taranja ity mihitsy aho saingy androany kosa dia tena naka toerana tsara nanomboka tamin'ny minitra voalohany mihitsy aho : naniry mafy ny handresen'i Portugal.
Faly be fa ny haraton'i Eder no valisoan-dranomason'i Kapiteny Ronaldo.
[Ankapobeny ] 09 Jolay, 2016 08:44
Isan'ny hira tena tiako hatramizay izy ity, toa angorodaon'i Regis no manaraka azy raha tsy diso ny fitadidiako ny tany amin'ny taona 80.
Elabe tsy re i Liva ka izao indray vao miverina an-tsehatra, niaraka tamin'i Olombelo Ricky tao amin'ny Palais de Sport teo ka asa na isan'ny averiny hohiraina ity.
[Ankapobeny ] 07 Jolay, 2016 21:51
Vita indray aloha ny revy "Tavamboky"
​Tsy be famisavisana, tsy be fandanjalanjana. Tsy asiana jery todika, tsy asiana famintinana. Noraisina ny fanapah​an-kevitra fa hovonoina tanteraka ilay takelaky ny tena atsy amin'ny tambazotra "facebook". Tsy nandany ora maro fa raha vao hita hoe izay no vahaolana dia nampiharina.
Afaka iray volana dia ho feno 8 taona ny nonenana tany, mba ampy kosa angamba izay o ?
Afaka miverina miserasera sy mitoraka blaogy tsara, afaka miverina mijery tantara mitohy sy vaovao an-tsary amin'ny fahitalavitra, sns.
Tsy nasiana resabe, izay naharay fampilazana dia tsara, izay tsy naharay dia hahare amin'ny hafa ihany atsy ho atsy. Tsisy azo hamerenana ny fanambarana rahateo fa dia zay zany !
Novonoina fa tsy nohidiana. Izany hoe na miverina mamoha trano any aza aho dia tsy afaka hiditra intsony, sady tsisy n'inon'inona intsony ao fa nasaiko nofafany daholo. Tsy nangataka tahiry aho fa atao inona tokoa moa !
Fony tsy tany 8 taona lasa izay, toa nety ihany ny fiainana k'ty !
[Aingam-panahy ] 06 Jolay, 2016 22:47
Mamo ny foko.
...mba dizina koa indraindray
Mamo ny foko